Niseko! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद doतुमा गर्न उत्तम चीजहरू - Best of Japan
माउन्ट योटेइ, "होक्काइडोको फुजी" भनिन्छ, निसेको स्की रिसोर्ट, होक्काइडो, जापानबाट
निसेको जापानको प्रतिनिधि रिसोर्ट हो। यो विश्वव्यापी रूपमा परिचित छ, खास गरी जाडोको खेलको लागि एक पवित्र ठाउँको रूपमा। निसेकोमा, तपाईं स्किइ enjoyको मजा लिन सक्नुहुनेछ नोभेम्बरको पछिल्लोदेखि मेको सुरूवातको लागि। माउन्टसँग मिल्दोजुल्दो सुन्दर पहाड छ। निसेकोमा फुजी। यो माथिको चित्रमा देखीएको "माउंट योटेइ" हो। यस पहाडलाई नदी पार गर्नका लागि अर्को पर्वत पनि छ। यो "निसेको अन्नुपुरी" तलको चित्रमा देखिएको छ। निसेको अन्नुपुरीको टेपमा, चार ठूला स्की रिसोर्टहरू विकसित भए। यी स्की रिसोर्टहरूले अद्भुत हिउँको गुणस्तरको साथ घरेलु र विदेशी स्कीयरहरू र स्नोबोर्डरहरू आकर्षित गर्दैछन्। थप रूपमा, निसेकोसँग अद्भुत तातो स्प्रि .हरू छन्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई परिचय दिन चाहन्छु कि तपाईंले निसेकोमा के गर्नुपर्छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई वसन्त, गर्मी, शरद asतु र हिउँदमा निसेको बारेमा निसेकोको बारेमा बताउनेछु। निसेकोमा जाडो धेरै लामो हुन्छ, र वसन्त, ग्रीष्म autतु, शरद fastतु चाँडो चल्ने जस्तो देखिन्छ। यद्यपि तपाईं यी मौसमहरूमा गतिविधिहरूको धेरै आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। म यस लेखको दोस्रो भागमा निसेको वसन्त, गर्मी, शरद introduceतु प्रस्तुत गर्दछु। यदि तपाईं यी मौसमहरूको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तल सामग्रीको तालिका हेर्नुहोस् र तपाईंको ख्याल गर्ने आईटममा क्लिक गर्नुहोस्।
सबैभन्दा लोकप्रिय स्की रिसोर्ट जापशुतस्टारस्टिन होक्काइडोमा। निसेको जाडो रिसोर्टका रूपमा प्रसिद्ध छ। तर मलाई यो रिसोर्ट क्षेत्रको छोटो वसन्त, गर्मी र शरद पनि मन पर्छ। कृपया विभिन्न asonsतुहरूमा अद्भुत निसेकोको मजा लिनुहोस्! सामग्रीको तालिका होसेकाइडोको होक्काइडो म्यापमा नीसेकोको फोटो हो निसेकोको फोटोहरू ...
यदि तपाईं जापानमा जाडो खेलको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म होक्काइडोमा निसेको स्की रिसोर्ट सिफारिस गर्दछु। निसेकोमा, तपाईं आश्चर्यजनक पाउडर हिउँको मजा लिन सक्नुहुन्छ। स्कीइ and र स्नोबोर्डि Besidesका साथै तातो स्प्रि .हरू पनि राम्रा छन्। त्यहाँ धेरै ढलानहरू छन् कि बच्चाहरू र शुरुवातकर्ताहरूले ठूलो सम्झनाहरू बनाउन सक्छन्। निसेकोका लागि, कृपया रेफर गर्नुहोस् ...
Major प्रमुख कारणहरू किन निसेकोलाई विश्वव्यापी रूपमा माया गरिन्छ
Niseko मा4स्की रिसोर्ट आनन्द लिनुहोस्!
वसन्त, गर्मी, शरद inतुमा गर्न उत्तम चीजहरू
निसेकोमा शरद leavesतुका पातहरूको मजा लिनको लागि best उत्तम ठाउँहरू!
त्यहाँ Niseko अन्नुपुरी भनिने पहाड छ, माउंट को अनुहार। Yotei माथिको। निसेको स्की रिसोर्टहरू यस निसेको अन्नुपुरीको ढाँचामा अवस्थित छन्। = शटरस्टक
चार ठूला स्की रिसोर्टहरू सुपरसुफ निसेको अन्नुपुरीमा फैलिरहेका छन् = स्रोत: NISEKO UNITED
हिउँको रूख, नदी र niseko स्टेशन मा घर मा दिउँसो दृश्य = शटरस्टक
निसेको सप्पोरोबाट करिब १०० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। यो लगभग १ 100० मिनेटको बसबाट सप्पोरो बाट निसेको हुँदै छ। न्यू चीटोज एयरपोर्टबाट निसेको सम्म यो बस द्वारा १ 150० मिनेट जति छ। तपाईं रेलबाट निसेको जान सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ केही रेलहरू सीधा छन्।
सामान्यतया, "निसेको" भनिने पर्यटन स्थल हो जो निसेको शहर र कुचन टाउनमा केन्द्रित छ। यो क्षेत्र माउन्ट छ। योटेइ (उचाई १1898 1308 m मीटर) जुन माउन्टसँग मिल्दोजुल्दो छ। फुजी पहिले उल्लेख गरिए अनुसार। त्यहाँ Niseko अन्नुपुरी (उचाई १ XNUMX मीटर) सुन्दर Shiribetsu नदी पारिको अर्को तिर छ। "नुपुरी" को अर्थ ऐन जातिको भाषामा "माउन्टेन" हो जो होक्काइडोका आदिवासी हुन्। निसेको अन्नुपुरीको टेपमा, त्यहाँ चार ठूला स्की रिसोर्टहरू छन्। कुनै स्की रिसोर्टबाट तपाई माउन्टको सुन्दर दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। एक घामको दिनमा Yotei।
अर्को YouTube भिडियो निसेकोमा sk स्की रिसोर्टहरू समावेश गर्दै "Niseko United" द्वारा निर्मित चलचित्र हो। यदि तपाईंले यो भिडियो हेर्नुभयो भने, तपाईं निसेकोको सम्पूर्ण वातावरण बुझ्न सक्षम हुनुहुनेछ।
पहुँच: नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट Niseko सम्म
जब तपाईं निसेको जानुहुन्छ, तपाईं विमानबाट नयाँ Chitose एयरपोर्ट जानुहुन्छ। न्यू चिटोज एयरपोर्टबाट निसेको सम्म, यो बसबाट लगभग २ घण्टा 2० देखि hours घण्टा 30० मिनेट लाग्छ। टाढा टाढा स्की रिसोर्टहरू जस्तो Niseko अन्नूपुरी पुग्न समय लाग्छ। नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट Niseko को दिशा निर्देशनहरूको लागि, कृपया तल मेरो लेख हेर्नुहोस्।
>> Niseko नयाँ Chitose एयरपोर्ट
किन निसेकोलाई माया गरिएको छ १: हिउँको गुणवत्ता राम्रो छ!
निसेको अब विश्वव्यापी लोकप्रियताको गर्व छ। किनकि त्यहाँ धेरै देशहरुका मानिसहरु छन्, मानिसहरु वास्तवमा जापानमा छ कि छैन भन्ने बारे बेवास्ता गर्छन्।
लोकप्रियताको सबैभन्दा ठूलो कारण हिमको गुणस्तर हो। निसेकोमा, तपाईं पाउरो जस्तो अद्भुत हिउँमा स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
पाउडर हिउँ असामान्य हुँदैन यदि तपाईं विश्व दृष्टिकोणबाट धेरै उच्च उचाईको ठाउँमा जानुहुन्छ। तर Niseko मा, खुट्टा मा पनि, तपाईं पाउडर हिउँ आनन्द लिन सक्नुहुन्छ!
थप रूपमा, हामी निसेको मा धेरै हिउँ छ। जापानको सागरबाट आउने बादलहरूले नीसेकोमा हिउँ पहिले ल्याउँदछन्। निसेकोसँग धेरै हिउँ भएकोले, यो भन्न सकिन्छ कि तपाईं अन्य स्की रिसोर्टहरूको तुलनामा पाउडर हिउँको जम्मा समय लिन सक्नुहुनेछ। यही कारण हो कि निसेको विश्वभरि स्काइरहरू र स्नोबोर्डरहरूको साथ लोकप्रिय छ।
किन निसेकोलाई माया गरियो २: दृश्य अद्भुत छ!
Yotei पहाड दृश्य Niseko स्की रिसोर्ट जाडो मौसम = शटरस्टक
निसेको स्की रिसोर्टबाट तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुनेछ। एक घामको दिनमा Yotei। माउन्ट योटेइ कुनै अग्लो पहाड होइन, तर यो एक सुन्दर पहाड हो जुन माउन्ट फुजीसँग मिल्दोजुल्दो छ। तपाईं माउन्ट फुजीमा नजोईकन पहाडका दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
निसेको स्की रिसोर्टहरूमा बिभिन्न पाठ्यक्रमहरू तैयार छन्। तपाईं सुन्दर रूखहरूको माध्यमबाट स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ र माउन्ट हेर्नुहोस्। Yotei जब तपाईं जंगल छोड्नुहुन्छ। कृपया यस अनुभवलाई सबै माध्यमबाट प्रयास गर्नुहोस्।
निसेकोलाई माया गर्नुको कारण:: तातो स्प्रि wonderfulहरू अद्भुत छन्!
वास्तवमा, दुबै माउन्ट। योटेइ र निसेको अन्नुपुरी सक्रिय ज्वालामुखी छन्। यस कारणले गर्दा, निसेको क्षेत्र तातो स्प्रि forको लागि पनि प्रसिद्ध छ। निसेकोमा त्यहाँ धेरै होटलहरू छन् जसमा तातो स्प्रि facilities्ग सुविधाहरू छन्। थप रूपमा, त्यहाँ धेरै तातो स्प्रि facilities्ग सुविधाहरू छन् जुन कोहीले पनि खसाल्न सक्छ। यो नै कारण हो कि निसेकोले रिपीटरहरू थप्दैछ।
निसेकोको तातो स्प्रिंग्स स्रोत प्रकारहरूमा धनी छन्। तपाईं विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि enjoyहरूको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ जस्तै सेतो मैला तातो पानी, खैरो तातो पानी, पारदर्शी पानी। तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। खुला एयर स्नानबाट Yotei। जाडोमा, तपाईं खुला हावा स्नानबाट सुन्दर हिउँ दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
लक्जरी होटेल र कन्डोमिनियममा अतिथि कोठाहरूको बालकनीमा तातो स्प्रि .हरू हुन सक्छन्। यदि तपाईं यस्तो कोठामा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं माउन्टको दृश्यको साथ तपाईंको दिमागलाई स्फूर्ति दिन सक्नुहुनेछ। तपाईंको आफ्नै तातो वसन्तबाट योटेइ।
जापानी तातो स्प्रि forको लागि, तपाईं तलको YouTube भिडियोहरू हेरेर रूपरेखा र शिष्टाचार बुझ्न सक्नुहुन्छ।
>> तपाइँ नेसेको आधिकारिक वेबसाइटमा तातो स्प्रि onहरूमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
किन निसेकोलाई माया गरियो 4: तपाई अंग्रेजीमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ!
निसेकोमा, तपाईं बाँच्न सक्नुहुन्छ तपाईं जापानी भाषा बोल्न सक्नुहुन्न भने पनि। तपाईं अंग्रेजीमा सामान्यतया संचार गर्न सक्नुहुनेछ।
हरेक वर्ष, Niseko मा धेरै विदेशी छन्। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै स्टाफहरू छन् जसले होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, पबहरू, स्की रिसोर्टहरू, इत्यादिमा अंग्रेजी बोल्न सक्दछन्। स्टाफको कोही-कोही जापानी बोल्न सक्दैनन्।
संकेतहरू पाठ्यक्रम अ not्ग्रेजी संकेतनको साथ हुन् एक होटलमा, एक जापानी पर्यटक कडा मुस्कान भयो "म जापानीमा संचार गर्न सक्दिन!"
NISEKO Mt.RESORT भव्य HIRAFU
निसेको माउंट आरईएसओआरटी ग्रान्ड हिरफु निसेकोमा सबैभन्दा ठूलो स्की रिसोर्ट हो। लिफ्टको संख्या, पाठ्यक्रमहरूको संख्या, खुट्टामा होटेल, निवृत्तिभरणको संख्या सबैभन्दा बढी निसेकोमा छ। खुट्टामा त्यहाँ धेरै पबहरू, क्याफेहरू र बारहरू छन्, ताकि तपाईं हिउँ पछि स्किइ enjoy राम्रोसँग लिन सक्नुहुन्छ। जे होस्, यो यसको लोकप्रियताको कारण भीड हुन्छ।
यदि तपाईं निसेकोको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लोकप्रिय स्की रिसोर्टमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने, यो NISEKO Mt.RESORT ग्रान्ड HIRAFU बेस गर्न राम्रो हुनेछ। यद्यपि निसेको सबै स्की रिसोर्टहरू ठुलो छन्। NISEKO Mt.RESORT Grand HIRAFU मा रमाईलो गरिसके पछि, कृपया अन्य स्की रिसोर्टहरूमा पनि जानुहोस् र फरकको मजा लिनुहोस्।
Elev शीर्ष उचाई ／ १,२०० मिटर
■ आधार उचाई ／ २260० मिटर
■ सबैभन्दा लामो रन ／ ,,5,300०० मिटर
■ कुल क्षेत्रफल ／ 325 हेक्टर
Imum अधिकतम ढलान ／ 40 डिग्री
S रनहरू ／ २।
Ift लिफ्ट ／ १२ (१ गोन्डोला सहित)
>> ग्रान्ड HIRAFU को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
निसेको गाउँ = शटरस्टकमा राती स्किइ .को साँझमा हवाई दृश्य
निसेको गाउँ सीधा दुई रिसोर्ट होटेलहरूमा जोडिएको छ "ग्रीन पत्ता" र "हिल्टन निसेको गाउँ"। यो एकदम सजिलो छ यदि तपाईं यी होटेलहरूमा बस्नुहुन्छ। यो स्की क्षेत्र हो जहाँ रिसोर्टको वातावरण राम्रोसँग निर्देशित छ। तपाईं आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, उदाहरणको लागि, कुमारी जंगलमा स्लाइड गर्ने कोर्स। त्यहाँ पाठ्यक्रमहरू पनि छन् जुन उद्देश्यले हिउँलाई दबाब दिदैन। बिहान जब हिउँ पग्लियो, तपाईं पाउडर हिउँमा २००० मिटर भन्दा बढीको लागि सरिन सक्नुहुन्छ। समग्र ढलान अपेक्षाकृत कडा छ, त्यसैले यो स्की रिसोर्ट उन्नत खेलाडीहरूको लागि अत्यधिक लोकप्रिय छ।
■ शीर्ष उचाई ／ १,२०० मिटर
■ आधार उचाई ／ २280० मिटर
■ सबैभन्दा लामो रन ／ ,,5,000०० मिटर
■ कुल क्षेत्रफल ／ 90 हेक्टर
Imum अधिकतम ढलान ／ 32 डिग्री
Ift लिफ्ट ／ 8
>> निसेको गाउँको आधिकारिक साइट यहाँ छ
निसेको अन्नुपुरी अन्तर्राष्ट्रिय स्की क्षेत्र
यो स्की रिसोर्ट परिवारहरूमा लोकप्रिय छ। अगाडिबाट माथि हेर्दा यो ठाडो देखिन्छ, तर डिटोर कोर्स कायम भइरहेको छ, त्यसैले एक सुरुवातीले सजिलैसँग रमाईलो पनि गर्न सक्छ। लिफ्ट ग्रान्ड हीराफुको तुलनामा अलि धेरै पुरानो हो। ग्रान्ड हीराफुको तुलनामा त्यहाँ थोरै मानिसहरू ग्लाईडिंग गर्दै छन्, त्यसैले तपाईं तुलनात्मक रूपमा शान्त ढ gl्गले सक्षम हुनुहुनेछ।
■ आधार उचाई ／ २400० मिटर
■ सबैभन्दा लामो रन ／ ,,4,000०० मिटर
■ कुल क्षेत्रफल ／ 84 हेक्टर
Imum अधिकतम ढलान ／ 34 डिग्री
Ift लिफ्ट ／ 6
>> निसेको अन्नुपुरीको आधिकारिक साइट यहाँ छ
Niseko HANAZONO स्की रिसोर्ट
यो स्की रिसोर्ट निसेकोको सबैभन्दा सामान्य छेउमा अवस्थित छ। यो सब भन्दा ठूलो Niseko ग्रान्ड Hirafu स्की रिसोर्ट छ।
निसेको हानाजोनो स्की रिसोर्ट निसेकोमा सबैभन्दा हिउँ परेको छ। पाउडर हिउँ खोज्ने स्कायर्स र स्नोबोर्डरहरूको बीच त्यहाँ लोकप्रियता छ। त्यहाँ धेरै पाठ्यक्रमहरू छन् जुन शुरुवातकर्ताहरूले पनि रमाउन सक्छन्।
■ आधार उचाई ／ २308० मिटर
■ सबैभन्दा लामो दौड ／ ／ m०० मिटर
■ स्कीएबल क्षेत्र ha／ हेक्टर
Imum अधिकतम ढलान ／ 30 डिग्री
Ift लिफ्ट ／ 3
>> HANAZONO को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
यी चार स्की रिसोर्ट शिखरमा जडित छन्।
चार स्की रिसोर्ट बीच शटल बसहरू। यदि तपाईंसँग सबै रिसोर्टहरूको लागि साझा लिफ्ट टिकट छ भने, तपाईं बसहरू नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
होक्काइडोको मरुभूमिमा बिभिन्न गतिविधिहरूको आनन्द लिनुहोस्!
वसन्त, गर्मी, शरद Nतुमा तपाईं निसेकोमा कस्तो किसिमको चीजहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ?
यहाँबाट, म निसेको वसन्त, गर्मी, शरद aboutतुको बारेमा वर्णन गर्छु।
निसेकोमा यी अवधिहरूमा तपाईं तल जस्तो धेरै बाहिरी खेलहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
वसन्त देखि शरद ,तु सम्म तपाई ड्राइभको पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। शरद Inतुमा, तपाईं शरद पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाइँ जाडो सहित जापानी तातो स्प्रि experience्ग्स बर्ष अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
ठिक छ भने, म यसलाई विस्तृत रूपमा परिचय दिनेछु।
निसेकोमा, दिनको तापक्रम मार्चको आसपासबाट बढ्न थाल्छ। यद्यपि बिहान र साँझको तापक्रम अझै कम छ। हिउँ झर्दै जान्छ। यस कारणका लागि, तपाईं अप्रिल सम्म पूर्ण-स्कीइ enjoy आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
स्की रिसोर्टहरू मेको प्रारम्भसम्म खुल्ला छन्। यदि यो घाममा छ भने, तपाईं छोटो आस्तीन को साथ स्कीइंग आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
मिशिमाको घरमा, काई घाँसहरू फूले जुन पूर्ण रूपमा खस्कन्छन्, निसेको, होक्काइडो
निसेकोमा, चेरी फूलहरू अप्रिलको अन्त्यमा मेको सुरूवातमा फूल्न थाल्छन्। चेरी फूलहरू माउंटमा फर्केर हेर्दै योटेइ असाधारण छन्।
थप रूपमा, निसेकोमा, तपाईंले मेको अन्त्यबाट जूनको बीचमा आश्चर्यजनक काई स्लिभरको सराहना गर्न सक्नुहुन्छ। कच्छनमा बस्ने मिशिमा नाम गरेको मान्छे घरमै बगैंचा खोल्ने छनौट गर्दछ। रातो, सेतो र गुलाबी फूलहरू 4000 वर्ग मीटरको फ्लोरबेडमा खिलछन्। माथिको तस्वीरमा, यो बगैचा चित्रित गरिएको छ।
निसेकोमा त्यहाँ एक सुन्दर नदी छ जसलाई "शिरिबेत्सु नदी" भनिन्छ। तपाईले राफ्टि experienceको अनुभव यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। के म सिफारिस गर्न चाहान्छु वसन्त राफ्टि is हो।
जब वसन्त आउँछ, अन्नूपुरीको हिउँ पग्लन्छ र नदीको पानी बढ्छ। वसन्तमा खसेको नदी पानीको मात्रा र द्रुत बहावमा धनी छ। तपाईं हिमाली पहाडहरू र चारैतिरको ताजा हरियो रमाईलो गर्दा तपाईं थ्रिलिंग राफ्टिंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
राफ्टिंगको अतिरिक्त तपाईं क्यानोइing र कायाकिंग पनि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। निसेकोमा थुप्रै कम्पनीहरू छन् जुन यी भ्रमणहरूमा संलग्न छन्। हिल्टन होटल आदिको साथ निसेको गाउँले तपाईंलाई यी अनुभव पर्यटनहरूको परिचय गराउँदछ।
निसेकोको ताजा हरियो र फूलहरूको आनन्द लिईरहेको बेलामा पैदल यात्रा लोकप्रिय छ।
तपाईं पहाडहरूमा हिंड्न पनि सक्नुहुनेछ स्की रिसोर्टहरूमा गोन्डोला लिएर। निसेको अन्नुपुरी अन्तर्राष्ट्रिय स्की रिसोर्टमा, गन्डोला गर्मीमा तल झै सञ्चालन गरिन्छ। यदि तपाइँ गोन्डोला प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ अन्नुपुरीको सातौं स्टपमा जान सक्नुहुन्छ। यो समुद्री सतहबाट करिब १००० मिटर माथि छ। यहाँबाट तपाईले माईसेन्ट जस्ता निसेकोको पहाड मात्र देख्न सक्नुहुन्न। Yotei, तर टाया टाया टाढा। "ग्रीष्मकालीन गोन्डोला" निसेको माउन्टेन रिसोर्ट भव्य हिराफुमा पनि संचालित हुन्छ। विवरणहरू निम्नानुसार छन्।
■ प्लेस / निसेको अन्नुपुरी स्की क्षेत्र
■ व्यापार अवधि / मध्य जुलाई - मध्य अक्टोबर
■ व्यापार घण्टा /:: ०-9-१-00: 16०
■ मूल्य / गोल यात्रा: वयस्क १२1240० येन, प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी 620२० येन, शिशु स्वतन्त्र
■ स्थान / NISEKO भव्य HIRAFU
■ व्यापार अवधि / मध्य जुलाई - सेप्टेम्बरको अन्तमा
■ व्यापार घण्टा /:: ०-9-१-00: ०० (अगस्त १० देखि अगस्त १ 16 =:: -00०-१-10: ००)
■ मूल्य / राउन्ड ट्रिप: वयस्क ११०० येन, बच्चा 1100० येन, शिशु स्वतन्त्र
निसेकोमा यो मानिसहरूले वसन्त देखि ग्रीष्म mountainतुमा हिमाल आरोहणको मजा लिइरहेका छन्। शुरुआतीहरूको लागि, त्यहाँ निसेको अन्नुपुरीको शिखर सम्मेलनको उद्देश्य हो। पर्वतारोहणको यात्रामा १ घण्टा 1० मिनेट लाग्छ। पहाडी आरोहणको अनुभव लिनेहरूका लागि त्यहाँ एउटा पाठ्यक्रम छ जुन माउन्टको शिखरमा लक्षित छ। योटेइ यात्रा समय करिब 30 घण्टा हो
माउन्ट योटेइ पावर स्पटको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस पहाडमा, अल्पाइन बोटबिरुवाहरू ग्रीष्म bloतुमा खिलछन् र लगभग १ birds० प्रजातिका जंगली चराहरू बस्दछन्।
साइकलिंग गतिविधिहरू शुरुआतको अनुभवको लागि सजिलो हुन्छ। निसेकोसँग साइकल भाँडाका धेरै पसलहरू छन्।
तपाइँ "NISEKO ग्रैंड HIRAFU" मा "माउन्टेन बाइक डाउनहिल" भन्ने गतिविधिहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक गतिविधि हो जुन स्की ढलान प्रयोग गरेर पहाडमा जान्छ। माउन्टेन बाइकि ofको शुरुवात क्रमिक पाठ्यक्रमको साथ सुरू गर्न सकिन्छ। जो कोहीसँग शारीरिक बल छैन, केहि दुकानहरु इलेक्ट्रिक सहायता संग माउन्टेन बाइक भाडामा लिन सक्छन्।
तपाईं निसेकोको शिरीबेट्सु नदीमा माछा मार्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मे देखि अक्टुबरसम्म गाईड टुरहरू धेरै छन्, त्यसैले यदि तपाईं निसेको आइपुग्नुभयो भने होटेलको फ्रन्ट डेस्कलाई सोध्नुहोस्। शुरुआतीहरूले पनि भाग लिन सक्छन्। अवश्य पनि तपाईं माछा मार्ने उपकरण उधार लिन सक्नुहुन्छ। शिरीबेट्सु नदीमा, तपाईं इवाना, यामामे, इन्द्रेणी ट्राउट र अन्य मा समात्न सक्नुहुन्छ।
Niseko घोडा सवारी को अनुभव को लागी एक स्थान को रूप मा एक लोकप्रिय क्षेत्र हो। तपाईं एक स्वभाव सवारी गर्न सक्नुहुन्छ - मैत्री घोडा र ट्रेक चौडा मैदान। तपाईं परिवारमा पनि अनुभव लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई एक आराम र काउबॉय मुडमा आनन्द लिनुहोस्।
तपाईं निम्न ठाउँमा घोडा सवारी अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
■ ठेगाना / सतोमी २238-,, निसेको शहर
0136०१44--3788-090 re9756 (रिजर्भेसन र सोधपूछिका लागि ० 5608 ०-XNUMX-XNUMX०XNUMX)
Iod अवधि / अप्रिलको आखिरी देखि अक्टुबरको अन्तमा
■ कोर्स / आधारभूत कोर्स (जूनियर हाई स्कूलको विद्यार्थी माथि, minutes ० मिनेट), अनुभवी व्यक्तिको लागि पाठ्यक्रम (minutes ० मिनेट), अनुभवी व्यक्तिको लागि पाठ्यक्रम (१ minutes० मिनेट)। मूल पाठ्यक्रम एक दिनमा दुई पटक आयोजित गरिन्छ। १० बजे र १ o'clock बजे सुरू गर्नुहोस्
■ मूल्य / आधारभूत पाठ्यक्रम एक व्यक्तिको लागि कर बिना १०००० येन हो
निसेकोमा धेरै एथलेटिक क्षेत्रहरू छन्। ती मध्ये, "NAC एड्भेन्चर पार्क" भव्य हिराफु स्की रिसोर्टको फेदमा ठूलो छ। आधिकारिक साइट तल छ।
>> NAC एड्भेन्चर पार्कको आधिकारिक साइट यहाँ छ
निसेको गाउँसँग "शुद्ध" भन्ने फिल्ड एथलेटिक पनि छ। यो परिवार संग अनुभव गर्न सजिलो छ।
>> कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
निसेकोमा, गल्फको मौसम मध्य मेमा शुरू हुन्छ। निसेको स्की रिसोर्टका लागि मात्र नभई उत्कृष्ट गल्फ कोर्सहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ। Yotei माउन्टेर हेर्दा खेल्दा स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ।
धेरै गल्फ कोर्सहरूमा, निम्न दुई गल्फ कोर्सहरू विशेष लोकप्रिय छन्।
यो ,,००7,003 यार्ड चैम्पियनशिप कोर्स निसेको क्षेत्रमा सबैभन्दा लोकप्रिय र सुन्दर पाठ्यक्रम हो। यस पाठ्यक्रममा unspoiled प्रकृति राम्रोसँग प्रयोग भएको छ। यो वसन्त पानीको एक धारा र एक प्राकृतिक सेता सन्टी जंगलको विशेषता हो।
>> हानाजोनो गोल्फको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
NISEKO भिल्लाग गोल्फ कोर्स
निसेको गाउँ गोल्फ कोर्स हिल्टनमा Niseko गाउँ संग नजिकै छ। तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। Yotei 6,845 यार्ड कोर्स बाट। हल बाहिर पछि, गरौं तातो वसन्तमा तपाईंको शरीर चal्गाइ।
>> Niseko गाउँ गल्फ कोर्स
यदि तपाइँ "बेलुन" सवारी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ जमिनको 30० मिटर माथिबाट निसेकोको मरुभूमिको मजा लिन सक्नुहुन्छ। हवा बेलुनमा प्रवेश गर्छ र यो बिस्तारै उग्रन्छ। बर्नरको आवाज अत्यन्त शक्तिशाली छ। किनकि टोकरीको ढोका ढोकाको रूपमा छ, सानो बच्चाले पनि सवारी गर्न सक्छ।
OAC Niseko बलून
Iod अवधि / जूनको सुरुवातबाट सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म
■ समय /:: -०-6: ,०, १ 30: -7०-१-30: .०
■ मूल्य / वयस्क २,2,700०० येन (जुनियर हाई स्कूलको विद्यार्थी वा माथि), बच्चा (years बर्षदेखि १२ बर्ष उमेर), कान्छो बच्चा (१- 4-12 वर्ष), परिवार प्याक ,,१०० (२ वयस्क, २ बच्चाहरू)
>> OAC Niseko बलून को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
फार्ममा Ostriches = AdobeStock
Niseko मा धेरै ranch छन्। ती मध्ये केही ठाउँहरू छन् जहाँ पर्यटकहरू स्वीकार गरिन्छ।
"निसेको ताकाहाशी डेरी फार्म" सँग "मिल्क स्टुडियो" छ जहाँ तपाइँ ताजा निचोरेको दुध प्रयोग गरी मिठाई खान सक्नुहुन्छ। तपाईं हस्तनिर्मित आइसक्रीमको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ रेष्टुरेन्ट पनि छ र स्पर्शले स्वादिलो ​​तरकारीको मजा लिन सक्छन निसेको नजिकै खाजा खाने बफेटको नजिक।
यस बाहेक, त्यहाँ दुर्लभ फार्म छ। दोस्रो एरिजिमा फार्म "Niseko Otrich फार्म" को रूपमा व्यापक रूपमा लोकप्रिय छ। धेरै शुतुरमुर्ग यहाँ चरिरहेका छन्। तपाईं शुतुरमुर्गलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक मिठो पसल छ कि यस फार्ममा शुतुरमुर्ग अण्डा प्रयोग गर्दछ।
निसेको ताकाहाशी दुग्ध फार्म
■ ठेगाना / सोगा 888 1-१, निसेको शहर
■ दुध स्टुडियो /:: -9०-१-30: ०० (जाडोमा १:18::00० सम्म)
निसेको ओर्टिक फार्म
■ ठेगाना / टोयोसाटो २ 239 -2 -२। निसेको टाउन
शुतुरमुर्ग जाडो बाहेक बाहिर चरिरहेका छन्।
गर्मी मा यी गतिविधिहरु मजा मान्छे को संख्या बढ्दो छ। निसेकोमा, कन्डोमिनियम र अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन रहनको लागि बढ्दो छ। म चाहान्छु कि तपाईले पनि गर्मी मा निसेको मा विभिन्न गतिविधिहरु को मजा लिन।
निसेकोमा, गर्मीमा तापक्रम केही दिनसम्म degrees० डिग्री सेल्सियस हुन सक्छ। यद्यपि, उच्च गर्मीमा औसत तापक्रम २ 30 डिग्री आसपास रहेको छ। यो पसिना तातो हुने छैन। कहिलेकाँही तपाइँ बिहान र साँझ चिसो महसुस गर्नुहुँदा तापमानको भिन्नतामा ध्यान दिन आवश्यक पर्दछ।
सेप्टेम्बरको मध्यदेखि अक्टुबरको बीचमा हरेक वर्ष निसेको सुन्दर शरद leavesतुको पातले घेरिएको हुन्छ। तपाईं धेरै ठूलो मात्रामा शरद leavesतु पातहरूको परिदृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाई Niseko मा जहाँसुकै शरद पातहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, म उनीहरू बीच तीन उत्तम स्पटहरू परिचय दिन चाहन्छु।
निसेकोमा धेरै मार्स छन् र प्रत्येक मार्सले पानीको सतहमा शरद leavesतुको पातहरू झल्काउँछ। विशेष गरी शिन्सेन-नुमा मार्श प्रसिद्ध छ। यो मार्श समुद्र सतहबाट 760० मिटर माथि अवस्थित छ। शरद Inतुमा, वरपरका रूखहरू रातो र पहेंलो हुन्छन्। एउटा रूख सडक पार्कि lotबाट मार्शसम्म मर्मत गरिएको छ। यसले मार्श गर्न लगभग २० मिनेट लिन्छ। किन हिँड्न तपाईलाई रमाइलो छैन?
ठेगाना: Maeda, Kyowa, Iwanai जिल्ला, Hokkaido नक्सा
निसेको पनोरमा लाइन
यदि तपाईं निसेकोबाट माथिको शिन्सेन नुमा मार्शमा जानुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं यो "निसेको पनोरमा लाइन" बाट आगाडि जानुहोस् (आधिकारिक नाम line line छ)। माथिको यूट्यूब भिडियो मा, यो शरद inतु मा Niseko Panoramic लाइन ड्राइव को लागि फिल्माया गया था। यो सडकले चिसेनुपुरी दर्रा (समुद्र सतहबाट 66२ मिटर) पार गर्दछ। यो घुमाउरो जारी छ, यो ड्राइभ गर्न गाह्रो छ, तर निसेको राष्ट्रमंडलका शानदार शरद leavesतु पातहरू आँखामा फैलियो। यदि यो घाम लाग्यो भने तपाईं माउन्टको भव्य दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। Yotei ड्राइव को बीचमा।
तेस्रो, शरद intतु रint्ग स्थान म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु निसेको अन्नुपुरी (उचाई १ 1308 मीटर)। सेप्टेम्बरको अन्ततिर, शरद leavesतुको पातहरू बिस्तारै यस हिमालमा सुरु हुन्छ। हिमालहरूमा हिंडेर, तपाईं माउन्टको सुन्दर शरद leavesतु पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ। Yotei र वरपरको पहाडहरू। निसेको अन्नुपुरी अन्तर्राष्ट्रिय स्की क्षेत्रमा गण्डोला शरद autतुका पातहरू देख्ने पर्यटकहरूकोलागि संचालित गरिन्छ। गोन्डोलाको बारेमा, मैले माथि परिचय दिएँ। यदि शरद Nतुमा तपाईं निसेकोमा जानुहुन्छ भने, कृपया निसेको अन्नुपुरीको शरद पातहरूको दृश्यहरूको आनन्द लिनुहोस्।
Niseko धेरै सुन्दर छ! = AdobeStock
तपाईं तलको युट्युब भिडियोहरू देखेर तपाईंको आफ्नै देशबाट प्रस्थान गर्ने र निसेको आइपुगेको मार्ग पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। चलचित्रमा परिचित परिवार टोकियोबाट नयाँ Chitose एयरपोर्टमा सरे, र बसले निसेको गए।
फिर्ता गर्न "Best of Hokkaido"